MAXAA SABABAY MAXAA SE LAGU DAWEEN KARAA SICIR-BARABKA....AXMED CARWO, LA-TALIYAHA MADAXWEYNAHA EE DHAQAALAHA
Sunday August 08, 2021 - 21:48:10 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxaan qoran maqaalkan 2015 oon Ka soo koobay talo bixin aan siiyey Madaxweyne Siilaanyo, oon u ahaa La-taliyaha Dhaqaalaha, Ganacsiga iyo Maalgashiga.
kordhayey. Waana mid aynu wax la wadaagno adduunka, wax badanina ay inaga inagu khaas tahay. Waa mid lagaga bixi karo xanuunkiisa inta badan iskaashi shacbi iyo xukuumad ka yimaada, bal se ay tahay inay aanu dawlad ahaan si wadajir ah uga hawl galno, shukaantana ay u qabato xukuumaddu. Halkaas su' aal ayaa ku jirta oo ummaddeenu xukuumad iyo dawlad isagu si ayey u adeegsadaan. Aan qayaxo, ee xukuumaddu waa Golaha Fulinta, Dawladduna waa seddexda Gole ee Fulinta, Sharci-dejinta iyo Garsoorka iyo laamahooda oo dhan.
Cilmiga dhaqaalaha sicir-barabka waxa jiray hab loola tacaalo, dhawaanahan. waxa soo kordhay noocyo magacyo kale ku soo kordhiyey ooy ka mid yihiin stagflation oo ah sicir-barar (inflation) ay barbar socoto Deflation ( Sicir hoos u dhac)..matalan sicir bararku badiyaa waxa la socda shaqaalaha oo badan, oo suuqa shaqada leysku eryo, mushaharku kor u kaco, sanadadan danbe iyadoo sicir-barar jiro ayey wehelisaa shaqo la' aan baaxad weyni. Taas oo ka dhigta daaweynte mid kiniino badan oo is burinaaya lagu dabiibo. Waayo daaweynta sicir bararka waxa badiyaa ka dhasha shaqo yareyn.
Arrimahan la xidhiidha dalkeenu, waa iyada oo shaqo la'aan jirto ayey haddana ina hayaa sicir barar, daaweynteeduna waa laba iska hor yimaada , hase yeeshee waxaan u arkaa keyna mid macmal ah oo la farsameyn karo, walow waqti iyo juhdi u baahan yahay. Sicir bararkeenu waa mid aynu si sahlan gacmaheena ugu sameynay.
Wasaaradaha, Wakaladaha, Dawladaha Hoose, iyo Hay'adaha xukuumaddu iyo Golayaasha Barlamaanka dhammaan waa inay xisaabtooda bankigu ahaataa Shilin bes ooy ka furnaantaa Bankiga Dhexe oo keliya.
Waxa aynu ognay in maalgashiga ugu badan ee qurbojoogu yahay dhulka oo sicirkiisu ka qaalisan yahay magaalooyinka dunida ugu qaalisan. Waayo ma hayaan meel kale ooy wax ku duwadaan. Lacagtaasi dheeriga ah ee meel la dhigto la la' yahay qayb weyn ayey ka tahay sicir bararka.
Waa in la sameeyaa sharci dhammeystiran oo la xidhiidha dhismaha shirkadaha iyo kormeerkeeda, iyo hay'addii ilaalin lahayd.
Sidoo kale waa in la helaa sharciyo tafatiran oo la xidhiidha cashuuraha nooc kastaba, kuwaas oo toos u sheegaaya ciqaabta ay leedahay cashuur bixin la'aantu.
Dabcan mas'uuliyadda kowaad waxa leh xukuumadda, hase yeeshee damqasho ayey leedahay daaweynteedu, taas hadday mucaaridku siyaasadeeyaan bulshadana war dusha ka malabeysan la siiyo, hoostana dacar ah, waa iinta dimuquraadiyada oo xukuumaddu ku dhiiranmeyso.
eci.advisor@gmail.comSent from my iPad